Foldable စမတ်ဖုန်းကို CES 2019 မှာမိတ်ဆက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ LG, ကမ္ဘာ့ပထမဉီးဆုံး Foldable စမတ်ဖုန်း? – AsiaApps
Foldable စမတ်ဖုန်းကို CES 2019 မှာမိတ်ဆက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ LG, ကမ္ဘာ့ပထမဉီးဆုံး Foldable စမတ်ဖုန်း?
November 6, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Foldable စမတ်ဖုန်းကို CES 2019 မှာမိတ်ဆက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ LG, ကမ္ဘာ့ပထမဉီးဆုံး Foldable စမတ်ဖုန်း?
ခေါက်နိုင်/ ဖြန့်နိုင် လုပ်နိုင်တဲ့ Foldable စမတ်ဖုန်းအမျိုးအစား အတွက် Huawei, Xiaomi, LG, Samsung, Motorola အစရှိတဲ့ စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေအပါအဝင်တော်တော်များများက ၂၀၁၈ နှစ်အစလောက်ကတည်းက ကြိုးစားနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Samsung ဆိုရင် ပြီးခဲ့တဲ့ CES 2018 တုန်းက ၂၀၁၈ နှစ်လယ်လောက်အတွင်းမှာကို Foldable စမတ်ဖုန်းထွက်နိုင်အောင် ကြိုစားဖို့ရှိတယ်လို့ ဆိုခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ မှန်းထားတဲ့ အချိန်ထက် အနည်းငယ်ကျော်လွန်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Huawei, Xiaomi, Motorola အပါဝင်တခြား စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေကို ၂၀၁၉ နှစ်လယ်လောက်မှ Foldable စမတ်ဖုန်းအမျိုးအစားထွက်ရှိလာနိုင်မယ်လို့ တော်တော်များများက မျှော်မှန်းထားခဲ့ပြီး Samsung နဲ့ LG ကိုတော့ ၂၀၁၉ နှစ်အစပိုင်းလောက်မှာ Foldable စမတ်ဖုန်းထွက်ရှိလာနိုင်ဖို့ မှန်းထားခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Samsung ကတော့ Galaxy F ဆိုတဲ့ Foldable စမတ်ဖုန်းကို ထုတ်လုပ်မှာဖြစ်ပေမယ့် စတင်မိတ်ဆက်မယ့်ရက်ကို ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသေးတာကြောင့် ၂၀၁၉ နှစ်အစပိုင်း မိတ်ဆက်နိုင်မယ်လို့ အတိအကျမပြောနိုင်ပေမယ့် LG ကတော့ တရားဝင်မိတ်ဆက်သွားတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို Tipster ဖြစ်သူ Evan Blass ရဲ့ Tweet အရ ပြောကြားနိုင်ပြီလို့ ဆိုရမှာပါ။
CES 2019 မှာ Samsung ပဲ Foldable စမတ်ဖုန်းကိုမိတ်ဆက်မိတ်ဆက်၊ LG ပဲ မိတ်ဆက်မိတ်ဆက် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ သူ့ကိုကမ္ဘာ့ပထမဉီးဆုံး Foldable စမတ်ဖုန်းလို့ မဆိုနိုင်တော့ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်လောက်က ကယ်လီဖိုးနီးယား အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီ Royole က FlexPai အမည်နဲ့ Foldable စမတ်ဖုန်းအမျိုးအစားကို ပထမဉီးဆုံးမိတ်ဆက်လိုက်တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ FlexPai ရဲ့ဒီဇိုင်းကာလ အနေအထားနဲ့ Spec ကိုတော့ အောက်က ၂ မိနစ်အကြာရှိတဲ့ ဗီဒီယိုမှာ ရှိုးလိုက်ပါဉီး။
ကယ်… Royale ကအသံတိတ်သိုင်းကွက်နဲ့ ကမ္ဘာ့ပထမဉီးဆုံး Foldable စမတ်ဖုန်း ဂုဏ်ကို သိမ်းယူပြီးသွားပြီဆိုတော့ LG, Samsung အပါအဝင် တခြား စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူတွေဟာ ဒီထက်ကောင်းတဲ့ ဒီဇိုင်းအနေအထား နဲ့ Hardware ပိုင်းတွေဖန်တီးပြီး အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ ဂုဏ် အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုလောလောဆယ် ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာကတော့ လာမယ့် ၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီလမှာ ကျင်းပမယ့် CES 2019 ပွဲမှာ LG ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ မိတ်ဆက်သွားမှာလဲဆိုတာပါပဲ။..
Android, LG, Motorola, Samsung, Xiaomi
ဖုန်းထဲမှာတင်​ ကာရာအို​ကေဆိုနိုင်​မယ့် SingPlay: Karaoke your MP3
Xiaomi သုံးတဲ့သူတွေအတွက် Click တစ်ချက်တည်းနဲ့ အဆင်ပြေစေမယ့် Google Installer